Fanadinadinana amin'ny Hongroà - Fanolorana ho an'i Hongria, Aostralia ary Brezila. - 1aviagem.com
Fanadinadinana amin'ny Hongroà - Torohevitra ho an'i Hongria, Aostralia ary Brezila.
Posted 9 Novambra 2018 1 fanehoan-kevitra ny Rômulo Lucena
Amin'izao androany izao dia hiresaka amin'ny olona isika, farafaharatsiny. Teraka tany Hongria izy, nandalo an'i Shina ary niaina tany Aostralia! Ary vao haingana nitsidika an'i Brezila sy tany Amerika Latinina. Izaho dia miresaka amin'i Chris amin'izao fotoana izao.
Nihaona izahay nandritra ny fitsangatsanganana nanomboka tany Finlandy ary nifarana tany Alemaina, nandalo an'i Rosia. Izaho irery no Breziliana, ary izy ihany no hongroà.
Nihaona tamin'ny bus izahay. Olona tsy manam-paharoa izy ary manana safidy matanjaka ary afaka mandamina tsara. Mora ny mianatra fiteny vaovao ary miaina any amin'ny firenena samihafa izy. Manana biby fiompy koa izy, soavaly kely, Hoy aho, alika lehibe. Tena tsara tarehy izy ary tena lehibe.
Hatramin'ilay dianay dia tsy nifandray intsony izahay hatramin'izao, na aiza na aiza. Ary izy dia nandeha tany Brezila mihitsy aza, izay toerana hihaonanay indray ary mahazo ny zava-mitranga ankehitriny. Tsara foana ny mahita namana. Izaho dia miresaka amin'i Chris amin'izao fotoana izao.
Toy ny mahazatra ao anaty tafatafa amin'ity blôgy ity dia hovaina ny lokon'ny lahatsoratra. Hahita ny loko maitso aho, ary i Chris ilay loko mena. Avia?
1- Chris, taiza ianao no teraka ary aiza izao iainanao izao?
Teraka tany Budapest, Hongria aho. Mipetraka any Brisbane Australia aho ankehitriny.
2- Oviana ianao no nifindra?
- Nifindra aho fony aho mbola 6 volana.
3- Inona no tianao indrindra amin'ny Hongria?
- Ny sakafo sy ny paprika. Ny zava-misy eto Aostralia dia tsy manana ny tsirony tahaka ny teo.
4- Inona no azonao ovaina any Hongria raha azonao atao?
- Hanova ny toekarena aho. Karama ambany sy avo lenta ...
5- Inona no tianareo horesahina amin'ny mpizahantany iray na hanao fitsidihana any Hongria?
"Budapest, tsy mitovy amin'ny tanàna lehibe indrindra. Maro loatra ny zavatra tokony hatao. Tena mila tsy ho maika ianao. Ny faritra avaratra toa an'i Eger dia manana zavatra betsaka atolotra.
6 - Ary ho an'i Aostralia, manana fanoloran-kevitra ve ianao?
- Tahaka ny firenena hafa mila fikarohana ianao alohan'ny hahalalanao ny loza sy ny fiahiana izay tsy maintsy alaina alohan'ny diany. Ohatra, ny voay dia olana goavana amin'ny faritra maro. Fa ny alan'i Daintree sy ny Haran-dranomasina Barry Lehibe dia toerana tsy mahagaga.
7- Raha miresaka momba an'i Brezila amin'izao fotoana izao ianao, ahoana ny fijanonanao? Afaka manatsara zavatra ve isika? Inona ny fahatsapanao ankapobeny, nahatsapa ho tsy azo antoka ve ianao?
- Faly aho tonga sy mitsidika anao ary tia mijery ny Amazon! Saingy hitako ny tanànan'i São Paulo sy Rio tsy mahazo aina. Ny zavatra voalohany renao momba azy ireo dia vaovao mikasika ny heloka bevava. Nolazaina taminay tantara marobe (teny an-dalana) izay marina na tsy natao fotsiny fa solika mba hampatahotra ny tahotra.
8- Fantatro fa nahita sarimihetsika mikasika an'i Brezila ianao, karazana horonantsary inona? Tadidinao ve ny anarany?
"An, anisan'ireo ny tanànan 'Andriamanitra.
9 - Ary ny Breziliana fantatrao dia toy ilay hita tao amin'ny sarimihetsika?
"Tsy nandeha tany amin'ny favela aho. Te handeha aho, saingy tsy dia tiako loatra. Amin'izany fotoana izany dia mety ho tsy fanajana ny mponina izany. Ary nampanantenaiko ianao fa tsy handeha irery. 😆
- Eny tokoa, nanao izany aho, fa te-handeha any Rocinha ihany koa amin'ny fotoana fifidianana! (Tamin'izany fotoana izany dia tsy afaka nitazona toerana iray akory aza aho) Tamin'ny fotoana iray hafa dia nandeha niaraka taminao aho, saingy tamin'io fotoana io dia tsy nisy azo antoka.
10: Te-hiteny zavatra hafa ve ianao? Angamba hafatra ho an'izao tontolo izao! Izany dia hitazona ao amin'ity blôgy ity.
- Na dia efa nampitandremana aza aho mikasika ny loza ateraky ny any Brezila, na ireo mpitarika ao an-toerana aza dia manoro hevitra aho fa hihaino ny olona, ​​fa ny torohevitra ihany no ampiasaiko, aza avela ho be loatra ao an-tsainao izany. Raha manahy mafy ianao dia mivezivezy ary izany dia hanampy anao hankafy kokoa ny fiarabe. Manoro hevitra ny hitsidika an'i Amazon kokoa aho, mahafinaritra any. Fantatro fa manararaotra ireo firenena maromaro izy, saingy teo amin'ny lafiny Breziliana sy Peroviana aho ary tena tiako izany.
- Misaotra anao amin'ny sainao.
- Misaotra anao tamin'ilay dinidinika.
"Te hiverina tsara amin'ny dianareo aho."
Ary eto izahay dia mifarana amin'ny resadresaka hafa.
Talohan'ny famaranana dia te-handao ny fandinihana aho:
Vao haingana ny tambajotran'i Globo no nanao fanentanana "Breziliko", izay nolazain'ny Breziliana ny zavatra nantenain'ireo mpitondra teo aloha.
Saingy, te-hanao fanentanana samihafa aho: "Inona no fahatsapan'i Brezila amiko?".
Hitanao tamin'ity tafatafa ity fa maro ny resaka momba ny herisetra ary mbola misy ankehitriny ho an'ny mpizaha tany. Na dia ao amin'ny sarimihetsika aza ny fahatsapana izay lasa, dia toerana mampidi-doza i Brezila. Notanisainy ny sarimihetsika "Tanànan'Andriamanitra", saingy nosoratako ho an'ny "Carandiru", "Elite Squad" I sy II. "Ilay mpizahatany" sy ny sisa.
Heveriko fa afaka miova izany ny Breziliana. Ary indrindra aho miresaka amin'ireo Breziliana mivezivezy any ivelany, na ho an'ny asa, na fizahan-tany na fianarana. Inona no tsapanao momba an'i Brezila? "
Raha tianao ny miala amin'ny fanehoan-kevitra ny eritreritrao dia mamela izao tontolo izao any ivelany. Ary zarao ity fampielezan-kevitra ity miaraka amin'ny tenifototra #ImpressaoBrasileira
Manana zavakanto maro, natiora, kolontsaina, gastronomy i Brezila, ary mino aho fa lehibe noho ny tahotra rehetra izy ireo. Hanova ny fomba fijerin'i Brezila ve isika?
Iza moa no mahalala fa afaka mitondra ny mpizaha tany ho any Rocinha aho amin'ny manaraka? (Hanampy ahy ve ianao?).
Amin'ny lahatsoratra ho avy dia hiresaka momba ny traikefa azon'ireo mpizaha tany any Brezila aho.
Ho an'ny lahatsoratra hafa tahaka izao, tsindrio fotsiny ny sarintany eto ambany.
resadresaka Amazon Aostralia Brasil Budapest Tanànan'Andriamanitra heloka bevava Daintree Eger resadresaka faritra iva ireny harambato lehibe Hongria impressaobraasileira Printing Services tahotra Rosia tolo-kevitra Elite troop mpizaha tany
1 fanehoan-kevitra	Leave a Comment >
Pingback: Nanadihady vehivavy vehivavy meksikanina izahay ary nitondra Coronavirus Fangatahana sy toro-hevitra momba an'i Meksika - 1aviagem.com
Jereo fotsiny aho amin'ny #eyes izay hanafika ahy! #cat #playing #loveit izy ireo
#graffiti ao # Brasília #1aviagem 1aviagem.com
Vao haingana izy. Ary avy eo dia miverimberina foana isika mba hahafahana misintona azy. Avy eo izy dia nitsambikina teo am-pofoany izy ary toy izao ...